Yeelo Qof Aad Kamaqasho Hadalka! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ma Ilaalisaa Naadafadda Deegaankaaga?
Miski Cabdinuur Salal, December 23, 2019
Ilhaan Ciise Maxamed — February 10, 2020
Horay ma’umaqashay ereyga lataliye? Ma’ogtahay in ey lataliyayaal leeyihiin ragga madaxda ka’ah shirkadaha waaweyn? Xitaa Madaxweynayaasha dalalka maamulo lataliya-yaal ayay leeyihiin!!!
Lataliye waxa ey kadhigantahay in qof lala wadaago arimaha aad qabanrabto, si’uu kaa lataliyo in ey habboonyihiin iyo inkale.
“Oday 70 jir ah ayaa laga sheegay; shalay hadaan talo heli lahaa maantay tanaad baan ahaan lahaa”.
Waxa aan uga jeedaa haddii uu qofku kafakaro wax uu sameynayo ama uu kala tashto cidda-dad ugu dhow, madhici lahayn in aan aragno 20jir xooggiisa iyo waqtigiisaba ku dhuminaya madadaalo, kadibna kugu dhahayo waqtiga ayaan isku dhaafsiinayaa.
Kaaga siidarane marki lala hadlo oo lawaaniyo oo wax loosheego aad buu uxanaaqayaa sababtoo ah diyaar umaba ahan in lalataliyo in wax loosheego diyaar uma’ahan, waxa uuba dareemayaa ama dareemeysaa in lagu gardarroonayo oo waqtigooda lagu heysto.
Xaqiiqdii dad ayaa kutaamaya “Alla yaa waqtiga idiin kordhiya aad howlo kale ku qabsataane” adigana mawaxa aad igu leedahay waqtiga ayaa igu badan oo aan isdhaafsiinayaa!!!
Waan xasuustaa anigaba Ilhaan ahaan xilli aan hurdo kujiray oo aan kaala mid ahaa waqti luminta balse mardhow oo aan hurdada kakacay waxa aan ogaaday xaqiiqada nolosha iyo saxnaashaha talooyinka iiga imaan jiray Waalidkey iyo Macallimiintaba, haba ugu horreyso Hooyadeey Hinda cimri iyo caafimaadba Allaha siiyo e.
Ujeedka iyo Biyo Dhacca Qormadaan:
Naftaada ka dhaadhici in aad ubbaahantahay dad aad latashato haba ugu horreeyaan waalidkaaga e.
Nasiibka aan leenahay ayaa ah in waalidkeen ey utaaganyihiin 24ka saac in ey qaladaadka naga saxaan iyaga oo waano iyo wax usheegis nala garabtaagan. Alla nasiib badninaa, yaaba heli karo.
Haddii aad lanooshahay waalidkaa waxa aad ogaaneysaa in aad hagaag santahay mise in aad qalloocdo, waxa aadna ku ogaan karta marki aad guriga timaado hadalada ey waalidkaa kugu yiraahdaan, tusaale1aad: heedhe gabadheydiyeey socodkaaga wuubatay waano waan kaaladaalay, gabareey cagta dhig oo mustaqbalkaaga kafakar.wiilashana waalamid.
tusaalaha2aad: gabadheydiyeey qeyr Alle hakusiiyo dadaalka siiwad ducana waan kuugu daray, kartidaana anigaa kugu dhalay horay usoco.
Yaan Kadhigtaa Lataliye?
Tags: Yeelo qof aad Maqasho Hadalka?
Next post PhD Ayaan ka Haystaa Xisaabta Hadana Tiro 4 ah Iskuma Qaybin Karo!
Previous post Waa Maxay Cajalka Nolosha?